-Dhacdo Qaboojiyaha Saliida Shiinaha ee warshadeeyayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha |CCMIE
Waxaan ku siin karnaa inta badan qaboojiyaha saliidda Shiinaha, Shiineeyska JMC FORD qaboojiyaha saliidda, Shiineyska WEICHAI Engine Saliida, Qaboojiyaha Shiineeyska Cummins Shiineeska Saliida, Shiineyska Yuchai Qaboojiyaha Saliidda Matoorka, Qaboojiyaha Saliidda Matoorka Shiinaha ee Yunnei, Qaboojiyaha Shiineeska Saliidda Shidaalka, Qaboojiyaha Saliidda Matoorka Shiinaha ee Shangchai.
kala soocidda qaboojiyaha saliidda
① Qaboojiyaha saliidda matoorka: wuxuu qaboojiyaa saliidda saliidda ee mishiinka, wuxuu ilaaliyaa heerkulka saliidda mid macquul ah (90-120 digrii), iyo viscosity waa macquul;booska rakibaadda waxay ku taal block-ka dhululubada matoorka, waxaana lagu rakibay si wadajir ah guriga inta lagu jiro rakibidda.
② Qaboojiyaha saliidda gudbinta: Waxay qaboojisaa saliidda saliidda gudbinta.Waxaa lagu rakibay qolka hoose ee biyaha ee hiitarka mishiinka ama meel ka baxsan kiiska gudbinta.Haddii ay hawadu qaboojiso, waxa lagu rakibaa dhinaca hore ee hiitarka.
③ Qaboojiyaha saliida dib u dhigista: Waxa ay qaboojisaa saliida saliidda marka uu dib u dhiguhu shaqaynayo, waxaana lagu rakibaa meel ka baxsan sanduuqa marsho.
Dhanka kale, waxay u badan yihiin qolof-iyo-tube ama alaab-saliid oo isku dhafan.
④ Qaboojiyaha gaaska dib-u-wareejinta: Waa qalab loo isticmaalo in lagu qaboojiyo qayb ka mid ah gaaska qiiqa ee lagu soo celiyay dhululubada injiinka, ujeeddadu waa in la yareeyo nuxurka oksijiinta nitrogen ee gaaska qiiqa baabuurka.
⑤ Qalabka qaboojiyaha Radiator: Waa qalab isku mar qaboojin kara walxo badan ama shay gaar ah sida biyaha qaboojinta, saliidda saliidda, hawada ciriiriga ah, iwm. , iyo garaadka.Tilmaamaha waxqabadka sare.
Qaboojiyaha, sidoo kale loo yaqaan intercooler, waa qalab loo isticmaalo in lagu qaboojiyo heerkulka sare iyo cadaadiska sare ka dib marka matoorka si xad dhaaf ah.Iyada oo la adeegsanayo qaboojinta intercooler, heerkulka hawada supercharged waa la dhimi karaa, taas oo kordhinaysa cufnaanta hawada, si loo gaaro ujeedada awoodda engine, isticmaalka shidaalka iyo dhimista qiiqa.
Shaqada qaboojiyaha saliidda ayaa ah inuu qaboojiyo saliidda sifaynta oo uu ku ilaaliyo heerkulka saliidda gudaha heerka caadiga ah ee shaqada.Matoorka awoodda sare leh ee la xoojiyay, culeyska kulaylka weyn awgeed, qaboojiyaha saliidda waa in lagu rakibaa.Marka matoorku shaqaynayo, viscosity saliiddu waxay noqotaa mid khafiif ah iyadoo heerkulka kordho, taas oo yaraynaysa awoodda saliidda.Sidaa darteed, matoorada qaarkood waxay ku qalabaysan yihiin qaboojiye saliid ah, kaas oo shaqadiisu tahay in la yareeyo heerkulka saliidda iyo ilaalinta viscosity gaar ah oo saliidda saliidda ah.Qaboojiyaha saliidda waxaa lagu habeeyaa wareegga wareegga saliidda ee nidaamka saliidda.
Hore: Bamka saliida ee mishiinka Shiinaha
Xiga: Qaybaha kaydka ah ee Injiinka Injector Shidaalka
3037535 xiriiriyaha NT855
4061380 dhuumaha biyaha
3035028 dareeraha NT855
4951495 bamka shidaalka
4058969 giraanta saliidda